Atletisma – Lalao Olympika 2016 (J.O) : tsy tafita ihany koa i Saholinirina Eliane | NewsMada
Atletisma – Lalao Olympika 2016 (J.O) : tsy tafita ihany koa i Saholinirina Eliane
Nifarana hatreo ny Lalao Olympika 2016 ho an’i Saholinirina Marie-Eliane. Atleta malagasy fahadimy amin’ny enina niaka-tsehatra. Tsy tody teo amin’ny manasa-dalana teo amin’ny 3000 m steeple, taranja atletisma, ny tenany.
Mafy ny ady natrehina. Tsy nisy afaka mihitsy aloha, hatreto, ireo atleta malagasy dimy amin’ny enina niaro ny voninahi-pirenena amin’ny Lalao Olympika 2016 (J.O) any Rio, Brezila. Atleta fanindiminy tsy tafakatra ary raraka teo amin’ny fisokajiana amin’ny taranjam-pifaninanana 3000 m steeple, eo amin’ny atletisma, i Saholinirina Marie-Eliane.
Tany amin’ny laharana faha-11 tamin’ny 17 nandray fiaingana teo amin’ny “série 3” no nisy azy teo amin’ny fifanintsanana fisokajiana. Vitany tao anatin’ny 9’45’’92 ny fifaninanana raha 9’24’’61 no namitan’ilay Kenyanina, i Hyvin Kiyeng Jepkemoi, nahazo ny lohany teo amin’iny fisokajiana iny. Tsy mbola fantatra kosa, hatramin’ny ora nanoratanay, izay nandrombaka ny medaly volamena teo amin’ity taranjam-pifaninanana 3000 m steeple ity.
Marihina fa mbola tany aorian’i Eliane avokoa ireo atleta avy any Irlande, Romania, Tiorkia, Alemaina sy Arzantina ary Angletera.
Ankoatra izay, niaka-tsehatra teo amin’ny taranjam-pifaninanana 110 m haies, eo amin’ny atletisma hatrany, ilay solontenantsika farany, i Ali Kamé, omaly.